Imihlaba yomhlaba Oktobha ngoku ikulungele - i-Geofumadas
Land Lines ikulungele in October
NgoNovemba, 2012 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Umxholo we-2012 ka-Oktobha kwiphepha lekota nganye Imihlaba Yemihlaba (vol 24, kungekhona i-4) ifumaneka ukukhuphela mahala kwiziko le-Lincoln Institute.
Izihloko ezifakiwe zihlola le miba elandelayo ephathelene nokusetyenziswa komhlaba kunye nenqubomgomo yerhafu:
Iindleko zempesheni kunye nemali kaRhulumente kamasipala
Ibhalwe nguRichard F. Dye noTracy M. Gordon
Eli nqaku kuthatha isiphumo umdla, kula maxesha xa amazwe umtamo lunatyiswe izibonelelo ukusuka kwinqanaba Central, ngelixa kufuneka professionalize abaphathi bendawo kwimiba kuquka ukukwazi ukuba endeudameinto.
Kwaye kamasipala esque urhulumente abe kwinqanaba elisezantsi-mali ngenxa yokuba amaninzi kula oorhulumente hayi Endabuqwebela imali eyaneleyo yokuhlawula iimfanelo eyenziwe kunyaka ngamnye. Eneneni, ngoku oorhulumente siyoboleka ukuze ahlawule abasebenzi iinkonzo eziqhubekayo ukutyhalela umthwalo berhafu elizayo.
Ekugqibeleni, xa urhulumente akukho izibonelelo, kwiCEMIS nasezintanjeni ukuba oomasipala awuyifumani ntoni ... yaye kwiimeko ezininzi ziye phantse bababamba ukudluliswa.
Ulondolozo lwendalo: Ukucinga ngendlela eya kwixesha elizayo
Ibhalwe nguBob Bendick
Umngeni lolondolozo ngaphambi nxamnye bunzima ngathi okanye hayi, kukudala ikamva ukuze kuxhamle abantu, ngokusekelwe malunga nokuqonda amaxabiso ezahlukeneyo uhlobo kwiindawo ezininzi kakhulu United States.
Utshintsho ekusebenziseni umhlaba kunye nokukhula koqoqosho eChina
Canfei He, Zhiji Huang kunye noWei Wang
Ukususela ekuphunyezweni kohlengahlengiso lwezoqoqosho, iChina ilandele imodeli yokukhula ngokusekelwe kwizixhobo ezinzulu, apho umhlaba udlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukukhula koqoqosho ngokukhawuleza. E-China, umhlaba awukho nje umphumo wokukhula koqoqosho, kodwa kunye nokuqhuba kwayo.
Ukugqithisa inani liphinde linikeze nezinye iziqulatho, apho iincwadi ezintsha zivela khona: Ziya kuhamba: Ubuninzi kunye nobume bommandla.
Khuphela umagazini apha
Post edlulileyo«Edlulileyo Oko sele phezulu Bentley and Trimble?
Post Next I-5 Izinto ezibalulekileyo malunga ne-Inspired 2012Okulandelayo "